You are here: Home somal Tartan Kubada cagta ah oo ay ku loolamidoonaan Odoyaashii hore oo lagu qabtay magaalada Hargeisa
Hargeisa(Somal Sports):- galabta ee ah abaaro 4:30 ayaa waxa garoonka 31 May ee xaafada Jigjiga yar la furay tartan kaasi oo Koobka ay ku hirdamidoonaan odayaashii hore ee ciyaaraha hore ugu ciyaari jiray caasimada iyo daafaheeda,
Tartanka oo ay ka soo qayb galeen 10 Kooxood oo ka kala socda Xaafadaha ay ka kooban tahay Caasimadu, tartankani waxa uu tartanadii hore kaga duwan yahay. Marka hore meesha waxa iskugu yimid dhalintii hore oo aad arki doontaa sawiro bari hore ay idiinku danbeeysau waayo waayo iyagana garoomada ay ugu danbeeysay dumo hore.
Dhanka kale lama ogola dhalintan danbe ee hada ku jirta garoomada amase ka tirsan Kooxaha kala duwan ee caasimad ka jira haday yihiinn Sera A, B, C midna lama ogola in ay ka mid noqdaan
Waxaa hadaba Ciyaarahani dhici doonaan Wiigiiba Khamis iyo Jimce oo kaliya hadii alle idmo. Waxaana kulankii manta oo ay jimce ayahayd furan lada kooxood ee kala ah.
Kooxda Telsom iyo Kooxda Axmed Dhagax. Kulankan oo ay guushu ku raaday Kooxda Telsom waxayna ku badiyeen 3 iyo 1.